सबै सिनेमा हल फेरि बन्द : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks सबै सिनेमा हल फेरि बन्द
काठमाडौं । नेपालका फिल्म हल सञ्चालक यतिबेला फेरि निराश भएका छन् । नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेपछि सरकारले सबै सिनेमा हल बन्द गर्ने आदेश मंगलबार दिएको छ । सो आदेशसँगै बुधबारबाट सिनेमा हल बन्द गर्नुपरेपछि हल सञ्चाक निराश भएका हुन् ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज हुने क्रम सुरु भएको थियो । जसका कारण फिल्म हल सञ्चालक र निर्माताले केही राहतको महसुस गरेका थिए । त्यो राहत क्षणिक सावित भएको छ । अब कहिलेसम्म कोभिडको लहर चल्ने हो भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन् ।
सिनेमा हलको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष तथा काठमाडौंको बौद्धस्थित सिद्धार्थ सिनेमा हलका सञ्चालक मधुसुदन प्रधानले सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरूले मंगलबारबाट सिनेमा हल बन्दको निर्देशन दिएको बताएका छन् । बुधबारबाट सबै सिनेमा हल पूर्णरूपमा बन्द भएको पनि उनले बताएका छन् ।
मुलुकमा १ सय ९० वटा सिनेमा हल सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये गत माघबाट २० प्रतिशत हल खुलेका थिए । नयाँ वर्षको अवसर परेर मुलुकका विभिन्न मल्टिप्लेक्ससहित करिब ५० प्रतिशत सिनेमा हल सञ्चालनमा आएका थिए । ती सबै हल बुधबारबाट पूर्णरूपमा बन्द भएको पनि अध्यक्ष प्रधानले जानकारी गराएका छन् ।
सिनेमा हल बन्द भएको अवस्थामा पनि हल भाडा तिर्नु पर्ने भएकाले अब हल फेरि लामो समय बन्द हुँदा कसरी हल भाडा, बिजुलीको बिल तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
पछिल्लो महिनाबाट भारतमा सुरु भएको कोरोनाको दोस्रो लहरका प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका मुख्य सहरमा चार दिन यताबाट कोरोनाको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि आफूहरूले हल बन्द गर्नुपरेको पनि अध्यक्ष प्रधानले जानकारी गराए ।
कोरोना प्रभावका कारण २०७६ चैतबाट नेपालका सिनेमा हलहरू बन्द भएका थिए । गत पुषको पहिलो सातासम्म करिब १० महिना नेपालमा सिनेमा हल कोरोनाको महामारीका कारण बन्द भयो । कोरोनाका संक्रमण केही घटेपछि गत १० पुषबाट हल सञ्चालकले नै एकतर्फी रूपमा सिनेमा हल खोलेका हुन् । तर, नयाँ सिनेमा नभएका कारण हल सञ्चालन राम्ररी हुन सकेको थिएन । बलिउडका केही नयाँ फिल्म र केही नेपाली नयाँ फिल्म रिलिज गरेका कारण गत साता सिनेमा हलमा सामान्य चहलपहल सुरु भएको थियो । तर, त्यो चहलपहल दुई सातामै रोकिएको पनि अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले बताएका छन् ।
लहरका रूपमा पटक–पटक कोरोनाको महामारी आउन थालेपछि सिनेमा हलको भविष्य संकटमा पर्न थालेको नेपाल चलचित्र संघका उपमहासचिव गोपाल काजी कायस्थले बताएका छन् । काठमाडौंको जडीबुटीमा पुष्पाञ्जली सिनेमा हल सञ्चालन गर्दै आएका कायस्थले अर्को महिनाबाट सञ्चालन गर्ने भनेर आफ्नो सो हललाई पुनः मर्मतसम्भार गरिरहेका थिए । तर, फेरि कोभिडले अनिश्चितकालीन अवस्था निम्त्याएकाले आफूहरू झन् संकटमा परेको उनले बताएका छन्, ‘नेपालका ९५ प्रतिशत सिनेमा हल भाडाको भवनमा रहेका छन् । सिनेमा हल बन्द भएको अवस्थामा पनि हल भाडा तिर्नु पर्ने भएकाले अब हल फेरि लामो समय बन्द हुँदा कसरी हल भाडा, बिजुलीको बिल तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’ कायस्थले राजधानीसँग भने ।
कायस्थ मात्र हैन, अहिले सबैजसो सिनेमा हलका सञ्चालक पीडामा छन् । काठमाडौंको कलंकीमा रहेको कलंकी सिनेमा हललाई पनि पुनः मर्मत गरेर नयाँ वर्षसँगै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, वैशाखको पहिलो साता नबित्दै अनिश्चित कालका लागि सिनेमा हल बन्द गर्नुपरेपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलले सताएको सो हलका सञ्चालक लक्ष्मीप्रसाद ढकालले राजधानीलाई बताए, ‘कोरोना कम भएपछि निर्माताले नयाँ सिनेमा रिलिजको धमाधम घोषणा गरेकाले अब हल चल्नेछ भन्ने आशा थियो । तर, फेरि कोरोनाको दास्रो लहर सुरु भएकाले हामी हल सञ्चालक निराश भएका छौं’, ढकालले राजधानीसँग चिन्ता व्यक्त गरे ।
कोभिडको लहर बेलाबेलामा आइरहने अवस्था देखेर नै काठमाडौंको चावहिलस्थित गोपीकृष्ण हल यतिबेला भत्काइएको छ । त्यहाँ अब १८ तले व्यावसायिक भवन बन्ने सो हलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप दाहालले बताएका छन् । गोपीकृष्ण मूभिजको बाँकी तीनवटा सिनेमा हल वैशाखको दोस्रो साताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको थियो । तर, एकाएक कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएपछि सिनेमा हल अब कहिले खोल्ने भन्ने निश्चित नभएको पनि दाहालले बताए ।
गोपी, कृष्ण, राधा र मिरा गरी चारवटा हल भत्काएर आफूहरूले व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउन लागेको भए पनि ओम, नम र शिवाय गरी तीनवटा हललाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्य भइरहेको पनि दाहालले जानकारी गराए । अब केही समय हल नखुल्ने भएपछि हलको पुनर्निर्माणको कार्य पनि अन्योलमा परेको उनले बताए ।
यसरी सञ्चालनमा रहेका हल पनि बन्द भएका छन् नै । वैशाख, जेठबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण र मर्मत भइरहेका सिनेमा हल समेत अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
प्राङ्गारिक मलतर्फ धनुषाका किसानहरु आकर्षित
जनकपुरधाम । कृषिजन्य तथा घरेलु जैविक फोहोर कुहिने वस्तुबाट गड्यौलाको सहायताले बनाउने प्राङ्गारिक मल तर्फ धनुषाका किसानहरु आकर्षित हुन थालेका छन । दर्जनो किसान...
प्रदेश डब्बु क्षत्री - February 12, 2020 0
मुग्लिन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–२ का वडासदस्य खिरबहादुर चेपाङको निधन भएको छ । मङ्गलबार राति १०ः३० बजे उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतलमा उनको ...
खेल डब्बु क्षत्री - August 30, 2020 0
राजनीति डब्बु क्षत्री - July 30, 2020 0
Editor-Picks मधुजंग पाण्डे - April 14, 2021 0
भर्खरै डब्बु क्षत्री - August 20, 2020 0
Breaking News डब्बु क्षत्री - January 22, 2021 0
अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम अब इदमा
Not-to-be-missed डब्बु क्षत्री - May 2, 2020 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले महिला पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका फिल्म लक्ष्मी बम अब आगामी इदमा रिलिज हुने भएको छ । यो फिल्मको...
Breaking News डब्बु क्षत्री - August 5, 2020 0
काठमाडौं । लेबनानको राजधानी बेरुतमा विष्फोटक पदार्थ राखिएको गोदाम घरमा विष्फोट हुँदा कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु भएको र करिब चार हजार जना घाइते भएका...
Exclusive डब्बु क्षत्री - November 19, 2020 0
दैलेखको नारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित ९ जनामा कोरोना संक्रमण
Breaking News डब्बु क्षत्री - July 6, 2020 0
दैलेख । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नारायण नगरपालिका २ जना जनप्रतिनिधि र ७ जना नगरपालिकाका कर्मचारीसहित नौ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल...